xiinfaniin's Content - Page 9 - Somali Forum - Somalia Online
Ina Uurbeyte is Khatumo eh? :D
At times our Norther brothers poor propaganda methods is astonishing
Jawaari vs. MMA
Magacyada xubnaha wafdiga Jubaland ee kusugan Addis Ababa
Magacyada xubnaha wafdiga Jubaland ee kusugna Addis Ababa ayaa kala ah
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan
Madaxweyne kuxigeenka Jubaland Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag
Prof.Maxamed Cabdi Gaandi
Cabdi Cali Raage
War Deg Deg ah– Puntlandi oo heley Qodobada Ergada Jubaland iyo DF ay isku mari waayeen ilaa hadda
Adis abeba–20 Ogoosto,2013–Pi– Tan iyo Xalay Waxaa Magaalada Adis Ababa ka socdey kulamo loogu Gogol xaarayo kulanka Caawa oo Talaado 20 Agoosto ah dhex mari doona Madaxweynayaasha Dowlada Jubaland iyo Dowlada Federaalka, Kulamadaas Wax natiijo ah kama soo bixin, in kastoo is badal Isfahan uu ka dhaci karo Kulanka labada Madaxweyne.
Ergada Dowlada Federaalka waxaa ka mid ahaa Xildhibaanadii had iyo jeer diidanaa in Jubaland Maamul loo sameeyo, kuwasoo Muqdisho shirar ku qaban jirey iyadoo ay weheliyaan Odoyaashii Beesha ****** sida Xaad iyo Axmed Diiriye. Xildhibaanadaas ayaa kulamada hadda ka socda Adis Ababa waxay la yimaadeen Wax ka baxsan Waxyaabihii looga wada hadley kulamadii kan ka horeeyey ee Adis Ababa ka dhacay bishii Juun sanadkaan.
Ergada ka socda Dowlada federaalka oo Xildhibaanadaas ka mid yihiin iyo Ergada ka Socda Dowlada Jubaland oo labada Madaxweyne ka maqan yihiin waxay Qolo walba soo bandhigtey Dhowr Qodob, oo kala ah sidaan:
Dowlada Federaalku waxay soo bandhigeen
In kulanka Adis Ababa lagu saxiixo Heshiis oranaya in kulanka Isfahan ka dhacay uuna kasii socon doono Muqdisho, intaas ka dibna Muqdisho lagu balamo si Heshiiska rasmiga ah la isula meel dhigo.
In Magaalada Muqdisho la isugu yimaado halkaasna Dowlada federaalku ay Maamul kumeel gaara u magacawdo Gobolada Jubooyinka.
In Gobolka Gedo la raaciyo Bay iyo Bakool , iydoo Ergada Gobolkaas kasoo jeeda laga reebayo Ergada ka imaanaysa Jubooyinka ee ka qayb gali doona kulanka Muqdisho
Jubaland arintaas waa ku gacan sayrtey Waxayna miiska soo saareen Qodobada dhankooda oo ay kamid yihiin..
In Dowlada Federaalku si buuxda ula shaqayso Dowlada Jubaland iyadoo la tixraacayo Dastuurka Federaalka, dastuurkaasoo noqonaya kii ay Lixda saxiixayaashu saxiixeen.
In Dowlada Jubaland ay iyagu maamushaan Deeqaha Caalamku siiyo Soomaaliya qaybtooda aysana Cidna Wakiil uga noqon.
Mushaarka Ciidamada Jubaland in ay qaybtooda ka helaan Dhaqaalaha Mushaar ahaanka loo siiyo Ciidanka Soomaaliya ee Beesha caalamku bixso
In sida Dastuurku qoraya ay Jubaland qayb ka ahaadaan Heshiisyada Caalamiga ah ee saameyn ku yeelan kara Deegaanada Jubaland.
Kulankii markii Dambe waa lagu kala kacay waxaana goobta Buuq ka dhaliyey Xildhibaanadii ka socdey Madaxweyne Xasan Sheikh, waxaana kulanka markii dambe goob joog ahaa Ergo ka socota Wadamada IGAD,
Ergada Jubaland waxay soo jeediyeen in Wadahadalka loo daayo labada Madaxweyne oo uu wehelin doono madaxweyne Xigeenka Jubaland, sidaas awgeedna ay Sadexdaan Masuul wada eegaan Qodobada ayna ka wada hadlaan.
Kulanka Madaxweynayaashu wuxuu dhacayaa Caawa Fiidkii saacada Adis ababa
lets hope for resolution is a nice sentiment
But Hassan Sheekh seems to be losing it again. This time though there are contingencies in place to ensure Jubbaland clears the way for establishing a full fledged federal state
It is funny that the president at his departure from Mogadishu characterized his trip to Adis Ababa as paying respect to Melez's grave (after one year of his death) :D
Melez is dead , but Kismayo is alive and kicking , poor president.
Wadahadaladii Dowladda Soomaaliya iyo Dowlad-goboleedka Jubbaland oo ka furmay Adis Ababa iyo Xassan Sheekh oo markii uu Adis Ababa soo aadayay warbaahinta u sheegay inuu aadayo Tacsida Ra’iisal wasaarihii hore ee Itoobiya (Warbixin xiiso leh)
Magaalada Addis Ababa ee xarunta Ethiopia ayaa waxaa xalay ka furmay wejigii labaad ee wada hadalada Dowladda Fedraalka Soomaaliya iyo Dowlad goboleedka Jubba Land oo uu ka dhexeeyo khilaaf muddo soo jiitamaayey.
Shalay magaalada Addis Ababa waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminaayo Madaxweynaha Dowladda Fedraalka Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud, inkastoo uu Madaxweyne Xassan Sheekh markii uu ka amba-baxaayey magaalada Muqdisho uu saxaafadda u sheegay in uu Addis Ababa u tegaayo sanad guuradii koowaad ee geeridii Raysal wasaarahii hore ee Ethiopia Meles Zanawe ayaa hadana ilo xog ogaal ah waxay Dhanaan Media u xaqiijiyeen in ajandaha ugu weyn ee uu Madaxweynahu u aaday Addis Ababa ay tahay wada hadalka Dowladda Ferdaalka iyo Dowladda Jubba Land.
Sidoo kale Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubba Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wafdi uu hoggaaminaayo ayaa shalay ka ambabaxay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyaga oo gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta Ethiopia oo ay isla shalay gaareen.
Wada hadalada oo ah labo faddhi ayaa Dowladda Fedraalka fadhiga koowaad waxaa u metelaaya guddi uu hormuud u yahay Wasiiru Dowlaha madaxtooyada Villa Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir waxaana kamid ah Xildhibaano Baarlamaanka katirsan.
Dhanka Dowlad goboleedka Jubba Land waxaa fadhigga koowaad ee kulanka uga qayb gelaaya guddi uu hoggaaminaayo Madaxweyne kuxigeenka koowaad ee Jubba Land Gen. Canbdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag.
Fadhiga labaad ee wada hadalada oo ah kulan adag oo indhaha lagu wada hayo ayaa waxaa si toos ah isku hor fariisanaaya labada Madaxweyne ee Xassan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Maxamed Islaam, waxaa sidoo kale kulankaasi qayb ka ah xubno sar sare oo kamid ah Urur goboleedka IGAD.
Wada hadalada oo ah kuwo aad looga dhursugaayo ayaa waxaa garwadeen ka ah Urur goboleedka IGAD, waxaana la filaayaa in ay kasoo baxaan natoojin xal u noqda khilaafka labada dhinac oo meel sare gaaray.
Xubno kamid ah waftiga Jubba Land ee Addis Ababa kusugan ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wada hadalada Dowladda Soomaaliya iyo Dowlad goboleedka Jubba Land mar uu la xiriiray Dhanaan Media.
Qodobada la hadal hayo ayaa waxaa kamid ah in Dowladda Soomaaliya oo geed dheer iyo mid gaaban u fuushay bur burinta Jubba Land ay shirka uga dhawaaqdo in ay aqoonsan tahay Dowlad goboleedka Jubba Land .
Arrimaha kale ee sida weyn loo hadal hayo waxaa kamid ah in xubnaha Dowladda Soomaaliya uga qayb gelaaya kulanka Addis Ababa ay kamid yihiin Xildhibaanadii af iyo adinba kula dagaalamay Jubba Land , waxaana xildhibaanadaasi kamid ah.
Xildhibaan Alankay, Xildhibaan Magan, Xildhibaan Daahir Amin Jeesow, Xildhibaan Samaan, Xildhibaan Goodir, Xildhibaan Sandheere iyo xildhibaano kale.
Urur goboleedka IGAD oo door muhiim ah ku leh kulamada Addis Ababa ayaa dhankooda waxay shaaciyeen in arrintu sidii hore kasoo durugtay, waxayna rajo ka muujiyeen is fahan dhexmara Dowladda Fedraalka iyo Dowlad goboleedka Jubba Land oo markii hore aad u kala fogaa.
Sikastaba wada hadaladaan oo ah wejigii labaad ayaa natiijada kasoo baxdaa waxay tahay mid la wada sugaayo maadaama xilligaan baahi weyn loo qabo is afrgad buuxa oo dhexmara labada dhinac ee Dowladda Soomaaliya iyo Dowlad goboleedka Jubba Land, waxaana wada hadalada kadib hadii la heshiiyo iyo hadii kale ay Jubba lanad sii wadi doontaa dhameystirka Maamulkeeda.